eParewa || Peace and Prosperity » आन्तरिक सुरक्षाको सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको अन्तर्कृया
आन्तरिक सुरक्षाको सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको अन्तर्कृया
२०७५ माघ २ गते बुधबार १०:२४
विश्वदृष्टिकोण के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रष्ट भएन भने हामीले बनाएको आन्तरिक नीति फगत कल्पना मात्रै हुन्छ । आन्तरिक नीति संसारमा भएका दुई सयवटै देशबाट कतै न कतै प्रभावित भइरहेको हुन्छ । सामान्तयः...
विश्वदृष्टिकोण के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रष्ट भएन भने हामीले बनाएको आन्तरिक नीति फगत कल्पना मात्रै हुन्छ । आन्तरिक नीति संसारमा भएका दुई सयवटै देशबाट कतै न कतै प्रभावित भइरहेको हुन्छ । सामान्तयः के भनिन्छ भने वाह्य नीति भनेको आन्तरिक नीतिकै विस्तृत रुप हुन्छ ।
यसरी हेर्दा तीन शक्तिले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको देखिन्छ । यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने अमेरिकाले समुन्द्रसँग नजोडिएको नेपाललाई किन इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा राख्यो ? बीआरआईमार्फत चीन र बिमस्टेक -बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) मार्फत भारतको दाउ पनि त्यही नै हो ।
यस्तो अवस्थामा यिनीहरूसँग अलग-अलग व्यवहार गरेर हामीले लाभ लिनसक्नु पर्छ ।
प्रकाशित मिति २०७५ माघ २ गते बुधबार १०:२४